TORITENY Alahady 18 Novambra 2017 | FJKM Amboniloha
Alahady 18 Novambra 2017
HAFATRA avy amin’ny Filohan’ny FJKM ho an’ny mpino FJKM
Entanina ny mpino FJKM mba hanohana ny Sekoly FJKM.
Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara ka :
Taomy ny olona handray an’I Jesoa Kristy.
Avereno amin’ny laoniny ny fitiavana voalohany napetrak’Andriamanitra tato anatintsika.
Tanteraho ny Tafika Masina in-1 isam-bolana farafahakeliny.
Zanaky ny FJKM tsy manao kolikoly, mijoroa amin’ny fahamarinana.
Mifady ny zava-pisotro misy alikaola eny fa na dia amin’ny fanaovana fety aza.
Alaviro ny fandihy sy fitafy (mampitanjaka , manara-batana) manetsika filàna ho an’ny hafa.
Tanteraho ireo ka mandraisa andraikitra tandrify amin’ny sehatra rehetra ametrahan’Andrimanitra anao.
« Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika”
Isaia 25 : 9 – 12 / Jaona 4 : 19 – 26 / Titosy 2 : 11 – 15
1- Inona no atao hoe vavolombelona mino ?
Dia izay nahita maso, na koa manana porofo tamin’ny alalan’ny vavahadin-tsaina 5 (maso , sofina , orona , vava , fahatsapana )
Sahy manambara marina ny zavatra hitany mba hitondra porofo ho fanampiana ny hafa.
Nifanena tamin’I Jesoa , nahatsapa ny fahotany ka nanapa-kevitrra handray ny Tompo . Tsy tompon’ny tenany intsony fa Jesoa Kristy noTompony sy mibaiko ny fiainany (olona efa nibebaka)
Olona mivavaka amin’ny Fanahy sy ny fahamarinana fa tsy fehezin’ny fombam-pivavahana.
Olona mandà ny fiainan’izao tontolo izaoizay mifanohitra amin’ny Sitrapon’Andrimanitra, ary mankahala izany , mahafehy tena amin’izay rehetra atao, mandala ny rariny , tia fahamarinana, manam-pitiavana, tia vavaka.
Lesona : Vavolombelona Mino dia ireo olona efa nandray an’I Jeso hibaiko ny fiainany ; miaina ny Filazantsara ka sahy manambara izany amin’ny hafa.
2- Inona no andrasan’ny mino
Isaia 25 : Miandry an’Andriamanitra ny mino . Mifandimby eoamin’ny fiainana ny fifaliana , ny zava-tsarotra , sy ny fahoriana. Amin’ireny trangam-piainana ireny dia mifaly mandrakariva ny mino satria manana ny Tompo izay manome fiainana ho azy.
Toromarika ahazoanao mitahiry ny fiainam-panahy eo am-piandrasana ny Tompo
Tsarovy fa Andriamanitra no nametraka anao teto ambonin’ny tany, ary raha miala eto dia tsy maintsy hifanatri-tava Aminy
Ny fifandraisana akaiky amin’Andriamanitra a amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fiainana ny Teniny no mamatsy anao ka ahavitanao asa tsara.
Tsy misy anelanelany ao amin’Andriamanitra fa na mafana , na mangatsiaka cf Apok 3 : 16. Raha tsy izany dia aloan’ny Vavany.
Saintsaino lalina isan’andro ireo , ka meteza ho tezaina sy amboarin’Andriamitra. Omany tsara ny TAVA (Tenin’Andriamanitra ; Vavaka ; Asa no iainanao dieny mbola velona mba tsy ho henatra no hifanatrehanao tava amin’Andriamanitra .
Vavolombelona mino aho
Ka tsy ho menatra hanambara ny fahatsaran’Andriamanitra amin’ny tenako sy amin’ny hafa,
Hankahala ny fiainan’izao tontolo izao ka hifehy tena hanohitra izany eo am-piandrasana ny fiahavian’ny Tompo,
Hitaona ny hafa mba ho resy lahatry ny fitiavan’Andriamanitra ka hahatonga azy ireo handray ny famonjena ao amin’I Jesoa Kristy.
Omaniko tsara ny TAVAko hifanatrehako amin’ny tavan’Andrimanitra amin ‘ny andro farany.
ANDRIAMAMONJISOA Georges, Mpiandry
Filoha Mpanampy Foibe FJKM